လာရှိုးမြို့ နမ့်တွန်းကျေးရွာအနီး ရွှေဘတို့ကောင်းကင်ငှက်တွေသုံးပြီး ပွဲကြမ်းနေတဲ့(ရုပ်သံ)
လာရှိုးမြို့ နမ့်တွန်းကျေးရွာအနီး တိုက်ပွဲတွင် တပ်မတော်က ရဟတ်ယာဉ်များ အသုံးပြုတိုက်ခိုက်​ခြင်း စတင်​ပြီပြင်းထန်​သည့်​ စစ်​​ရေးအရ အ​ရေးယူမှု့ စတင်​​… တပ်မ​တော်​က ပစ်​ခတ်​တိုက်​ခိုက်​မှု့ ရပ်​ဆဲ​ပေးထားတယ်​…..သူပုန်​အဖွဲ စစ်​​ရေးဖိအားမရှိ​တော့ အင်းအားစုဖွဲ့တယ်​… တည်​ငြိမ်​မှု့ ရရှိ ​အေးချမ်း​နေပြီဖြစ်​တဲ့ ဧရိယာထဲကို အင်​အား​တွေ တစ်​စ တစ်​စ ပို့လွှတ်​ စုဖွဲ့တယ်​…. လာရှိုးမြို့ နမ့်တွန်းကျေးရွာအနီး တိုက်ပွဲတွင် တပ်မတော်က ရဟတ်ယာဉ်များ …
(ရိုင်းတယ်လို.မထင်ပါနဲ. ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတလေးပါ)ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့် အတူနေပြီးတိုင်း အမျိုးသမီးများ ပြုလုပ်သင့်သော အချက် (၈) ချက်
(ရိုင်းတယ်လို.မထင်ပါနဲ. ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတလေးပါ)ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့် အတူနေပြီးတိုင်း အမျိုးသမီးများ ပြုလုပ်သင့်သော အချက် (၈) ချက် ….. ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့် အတူနေပြီးတိုင်း အမျိုးသမီးများ ပြုလုပ်သင့်သော အချက် (၈) ချက် ….. အမျိုးသမီး အများစုဟာ ချစ်တင်းနှောပြီးချိန်မှာ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန် ကိစ္စရပ်တွေကို သေချာဂရုစိုက်လေ့ မရှိကြပါဘူး ။ ဒီလို လိင်ဆက်ဆံမှုကနေ မမြင်နိုင်သော …
တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာကို တပ်မကြီးတွေလွှတ်လိုက်ပြီဆိုတော့၊ facebook ပရိတ်သတ်ကြီးက အပြုတ်ဆော်ပစ်၊ချကြ ဆိုပြီး လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးအားပေးတယ်။ ဓမ္မာရုံထဲမှာ ရှေ့တန်းထွက်တပ်ရင်းက ရဲမေတွေကကိုယ့်လင်သားတွေ အန္တရာယ်ကင်းပါစေဆိုပြီးပရိတ်သံကို အကျယ်ဆုံးရွတ်တယ်။ တောရွာလေးတစ်ခုမှာနေတဲ့ အမေအိုတစ်ယောက်ကရှေ့တန်းထွက်သားတော်မောင် ဘေးကင်းပါစေဆိုပြီးဘုရားစင်ရှေ့မှာ စိပ်ပုတီးတစ်ဖက်ကိုင်ရင်း ဆုတောင်းတယ်။ စာသင်ခန်းထဲက ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကတော့အဖေ၊တိုက်ပွဲတွေကြားမှာ ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ခပ်တိုးတိုးရွတ်ရင်း စာအုပ်ပေါ်ကို မျက်ရည်ကျတယ်။ ရန်သူ့နယ်မြေထဲက ရွာသူရွာသားတွေကတော့ဒီတစ်နှစ်လဲ စိုက်ခင်းတွေပစ်ထားခဲ့ရပြန်ပြီဆိုပြီးအထုပ်အပိုးတွေ သိမ်းတယ်။ အခွင့်အရေးသမားတစ်ချို့ကတော့စစ်ပွဲရပ် စာတမ်းကပ်ထားတဲ့တီရှပ်တွေကိုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ …
အစိမ်း​ရောင်​​တွေကိုမချစ်​တတ်​သ၍ 😌 ရာသီဥတု က​အမြဲ​ဖောက်​ပြန်​​နေဦးမှာပါ
ကိုယ်​ပိုင်​ဆိုင်​တဲ့ အသက်​နဲ့ ကိုယ်​အင်္ဂါအစိတ်​အပိုင်း မစွန့်​လွှတ်​နိုင်​ရင်​ စစ်​သားတစ်​​ယောက်​ရဲ့ တန်​ဖိုးကိုမ​စော်​ကားနဲ့😏 ကိုယ်​ပိုင်​ဘဝနဲ့ ကိုယ်​ပိုင်​မိသားစုကမ္ဘာ​လေး သံ​ယောဇဉ်​ မဖြတ်​နိုင်​လို့ ​ ကျောခိုင်းမထားခဲ့နိုင်​ရင်​ နိုင်​ငံ​တော်​အ​ပေါ်တာဝန်​​ကျေ​နေတဲ့ စစ်​သားကို မ​စော်​ကားနဲ့😏 ဘဝဟာ တိုက်​ပွဲပါလို့ သီချင်းလုပ်​ဆို​နေချိန်​ တိုက်​ပွဲဟာဘဝဖြစ်​​နေသူ​တွေ ကျည်​ဆံမိုးကြား အသက်​ကိုလု​နေရတယ်​😌 အပိုမပါတဲ့အသက်​နဲ့ အစားထိုးစရာမရှိတဲ့ အင်္ဂါမစွန့်​လွှတ်​နိုင်​ရင်​ စစ်​သားတစ်​​ယောက်​ရဲ့ဘဝကိုမ​စော်​ကားနဲ့😏 အစိမ်း​ရောင်​​တွေကိုမချစ်​တတ်​သ၍ 😌 ရာသီဥတု က​အမြဲ​ဖောက်​ပြန်​​နေဦးမှာပါ …
ချစ်တင်းနှောလို့ပြီးသွားတဲ့အချိန် ဒါတွေ လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ (အချစ်ပညာပေး) ….. လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင် နေ့စဉ်ဘဝမှာ လိင်မှုကိစ္စဆိုတာ မပါမဖြစ်ပဲမလား။ အဲ့တော့ ချစ်တဲ့သူနှစ်ဦး ချစ်တင်းနှောပြီးတဲ့အချိန်တိုင်း လုပ်မိတတ်တဲ့ အမှားလေးတွေနဲ့ ဘာတွေကို အဓိကထားပြီး လုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေကို ခုဆောင်းပါးလေးမှာ ပြောပြပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ၁။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ရေအမြန်ချိုးခိုင်းတာမျိုးကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ လိင်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာ သာယာမှုနဲ့ …
တကယ်ဆော်နေပြီနော်…လာရှိုးမြို့ နမ့်တွန်းကျေးရွာအနီး တိုက်ပွဲတွင် စစ်တပ်က ရဟတ်ယာဉ်များ အသုံးပြုတိုက်
လာရှိုးမြို့ နမ့်တွန်းကျေးရွာအနီး တိုက်ပွဲတွင် တပ်မတော်က ရဟတ်ယာဉ်များ အသုံးပြုတိုက်ခိုက် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လာရှိုးမြို့နှင့် ၁၂ မိုင်ခန့််အကွာ နမ့်တွန်းကျေးရွာအနီးတွင် တိမ်ဖြူဆီပန့်ဆိုင် မီးရှို့ခံရပြီးနောက်ပိုင်း တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများနှင့် ရဟတ်ယာဉ်များ လိုက်လံတိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်း လာရှိုးနည်းပညာတက္ကသိုလ်ဆရာများသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ဦးစောမင်းသော် ပြောပြချက်အရ သြဂုတ် ၁၇ ရက် နေ့လည် ၂ နာရီခန့်က သိရသည်။ “တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာက ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနဲ့ …
လားရှိုးနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းဆရာ/မ ကျောင်းသားများ မြို့ပေါ် ယာယီပြောင်းရွှေ့
လားရှိုးနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းဆရာ/မ ကျောင်းသားများ မြို့ပေါ် ယာယီပြောင်းရွှေ့ Saturday, August 17, 2019 လားရှိုးမြို့ ၀န်းကျင်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်သောင်းကျန်းသူများ၏ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လားရှိုး မြို့ပြင်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော လားရှိုးနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ဆရာ/ဆရာမ များနှင့် ကျောင်းသား သည် လားရှိုးမြို့ သာသနာဗိမ္မာန်သို့ ယာယီပြောင်းရွှေ့တိမ်းရှောင်ကြကြောင်း သိရသည်။ ” တစ်ချို့က ကားရှိတယ် ။ သူတို့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့ပြောင်းကြပါတယ်။ကျနော်တို့ လိုက်ပြောင်းပေးတာတော့ …
လုံး ဝ ခွင့်လွှတ်စရာ မရှိတော့ တဲ့ မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ရပ်
လုံး ဝ ခွင့်လွှတ်စရာ မရှိတော့ တဲ့ မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ရပ် မြော က်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာ ဂုတ်တွင်းတံတားကို လုံးဝပျက်စီးသွားအောင် အကွက်ကျကျ ကြိုတင်စီစဉ်ထားခဲ့တာကို ဒီနေ့ တံတားအောက်ခြေပတ်လည်မှာ ပဒေသာ ရှော့တိုက်မိုင်း အတွဲလိုက် ၃၃ လုံးကိုအဝါရောင်ပုံး ၅ ဂါလံဝင်များဖြင့် အားပြင်းယမ်းထည့်ထားတဲ့ မိုင်းပုံး ဖြင့်ထောင်ထားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်…. မိုးရေများကြောင့် …
ချစ်သူလက်မောင်းကိုရှိတ် မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲနေချိန်တုန်းက သူတို့အပြုံးတွေကြည်လင်လို့ဘယ်လောက်ပျော်နေလိမ့်မလဲ ….. ချစ်သူနဲ့ခွဲရှေ့တန်းသွားတဲ့အချိန်ကျန်ခဲ့တဲ့သူတို့ရင်ထဲဘယ်လောက်တောင် စိတ်ပူရှာခဲ့မလဲ ….. ချစ်သူကတိုင်းပြည်အတွက်အသက်စွန့်ခဲ့ပြီ ဗိုက်ထဲကလူမမယ်ကလေးလေး လူ့လောကမရောက်ခင်ထဲက ဖခင်မဲ့ရပြီ သူတို့အတွက်လည်း ကောင်းကင်ပြိုခဲ့ပြီ …… သူတို့ငိုနေမလား စိတ်နာနေမလား ရင်ကွဲပက်လက်ခံစားနေရမလား သူတို့ရင်ဘက်ထဲဝင်မခံစားရဲဘူး ပါရမီဖြည့်ဖက်မို့ဂုဏ်ယူလိုက်ပါဆိုတဲ့စကားသံ သူတို့ခံနိုင်ရည်ရှိပါ့မလား ……. မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မိသားစုတွေ ဘဝတွေ လောင်းကြေးထပ် နှလုံးသားတွေချခင်းခဲ့ရပြန်တယ် ….. credit …
လူနေအိမ်ပေါ်သို့ လက်နက်ကြီး ကျပြီး ပေါက်ကွဲ (ရုပ်သံ)
၂၀၁၉ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက် နေ့လယ် ၁ နာရီအချိန် ကျောက်မဲနေပြည်သူများလောလာဟလအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေမှုကြောင့် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ကာ ယခုအခါမိဘများလည်း မိမိတို့သားသမီးများကိုစာသင်ကျောင်းများမှလာရောက်ခေါ်ယူလျှက်ရှိရာ ကျောင်းများပိတ်ကုန်ကြပြီဖြစ်ပြီး ဗဟိုဈေးအတွင်းရှိဈေးဆိုင်များလည်း ဆိုင်ပိတ်ကုန်ပြန်ကုန်ကြပြီ ဖြစ်သည် ရပ်ကွက်အသီးသီးရှိနေအိမ်ဈေးဆိုင်များ အိမ်တံခါးများပိတ်ထားကြကာ လမ်းသွားလမ်းလာမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီ ကျောက်မဲနေပြည်သူတွေကတော့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ် လူနေအိမ်ပေါ်သို့ လက်နက်ကြီးကျည်ကျရောက်ပေါက်ကွဲ 17-8-2019 နေ့လည် ၁၂း၃၀ လားရှိုးမြို့၊ ရပ်ကွက်(၁၂)အောင်သစ္စာတိုးချဲ့ရပ်ကွက်ဘက်တွင် လူနေအိမ် ၂ …